ANDAMAN GOLD နဲ့ ချုပ် ဆိုထားတဲ့ သိန်းထောင်ချီ တန်ဖိုးရှိတဲ့ စာချုပ် ကို ပြတ်ပြတ် သားသား ဖြတ်သိမ်းလိုက်တဲ့ အဆိုတော် ဖော်ကာ – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ANDAMAN GOLD နဲ့ ချုပ် ဆိုထားတဲ့ သိန်းထောင်ချီ တန်ဖိုးရှိတဲ့ စာချုပ် ကို ပြတ်ပြတ် သားသား ဖြတ်သိမ်းလိုက်တဲ့ အဆိုတော် ဖော်ကာ
ANDAMAN GOLD နဲ့ ချုပ် ဆိုထားတဲ့ သိန်းထောင်ချီ တန်ဖိုးရှိတဲ့ စာချုပ် ကို ပြတ်ပြတ် သားသား ဖြတ်သိမ်းလိုက်တဲ့ အဆိုတော် ဖော်ကာ
စစ်တပ်နဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ Andaman Gold နဲ့ စာချုပ်ချုပ် ထားတဲ့ မြန်မာငွေ သိန်း 1600 စာချုပ်ကို ဖျက်သိမ်း လိုက် တဲ့ အဆိုတော် ‘ ဖေါ်ကာ ‘အဆိုတော် ‘ ဖေါ်ကာ အနုပညာသမားထဲမှာ စစ်တပ်နဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ Andaman Gold နဲ့ စာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့ ပွဲလေးဆယ်စာ မြန်မာငွေ သိန်း 1600 ကို အနစ်နာခ ပြီး စာချုပ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့Htain Minn Zaw အဆိုတော်’ဖေါ်ကာ’
Fokker, Wanted Band . လေးစား ပါတယ်။ လေးစားပါတယ် ဆက်လက် အောင်မြင်ပါစေ ညီလေး ၂ လကျော်ခန့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီး Brand Kol sa GS Andaman Gold နှင့်ဒီ အပတ်ထဲ တစ်နှစ်စာ စာချုပ်ချုပ်မည့် ကိစ္စအား ကျွန်တော့်ဖက်က ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါကြောင်း၊
ကူညီပေးခဲ့ကြသော “သာမန်ပြည်သူ ဝန်ထမ်း” ညီအကိုများ ကိုတော့ ကျေးဇူးတင် အားနာ ခွင့်လွတ်စေချင်ပါကြောင်း၊ ထိုအပြင် ကျွန်တော်သည် ဂီတနဲ့အသက်ရှင်သောဂီတသမားတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ Civil Disobedience ပြုလုပ်၍ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြသော ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအင်ဂျင်နီယာများ၊ ပည်သူ့ဝန်ထမ်း ဆရာဝန်များ နှင့် အခြားသော ဌာနဆိုင်ရပည်သူ့ ဝန်ထမ်းများနှင့် အတူတကွ ရပ်တည်သွားပါမည်။
Source : Fokker
စစ္တပ္နဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ Andaman Gold နဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ထားတဲ့ ျမန္မာေငြ သိန္း 1600 စာခ်ဳပ္ကို ဖ်က္သိမ္း လိုက္ တဲ့ အဆိုေတာ္ ‘ ေဖၚကာ ‘အဆိုေတာ္ ‘ ေဖၚကာ အႏုပညာသမားထဲမွာ စစ္တပ္နဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ Andaman Gold နဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားတဲ့ ပြဲေလးဆယ္စာ ျမန္မာေငြ သိန္း 1600 ကို အနစ္နာခ ၿပီး စာခ်ဳပ္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္တဲ့Htain Minn Zaw အဆိုေတာ္’ေဖၚကာ’
Fokker, Wanted Band . ေလးစား ပါတယ္။ ေလးစားပါတယ္ ဆက္လက္ ေအာင္ျမင္ပါေစ ညီေလး ၂ လေက်ာ္ခန႔္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး Brand Kol sa GS Andaman Gold ႏွင့္ဒီ အပတ္ထဲ တစ္ႏွစ္စာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္မည့္ ကိစၥအား ကြၽန္ေတာ့္ဖက္က ဖ်က္သိမ္းလိုက္ပါေၾကာင္း၊
ကူညီေပးခဲ့ၾကေသာ “သာမန္ျပည္သူ ဝန္ထမ္း” ညီအကိုမ်ား ကိုေတာ့ ေက်းဇူးတင္ အားနာ ခြင့္လြတ္ေစခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ထိုအျပင္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ဂီတနဲ႔အသက္ရွင္ေသာဂီတသမားတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ Civil Disobedience ျပဳလုပ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ ပည္သူ႔ဝန္ထမ္း ဆရာဝန္မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ ဌာနဆိုင္ရပည္သူ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ရပ္တည္သြားပါမည္။
Previous post UN ကို လူတွေ သိပ် မျှော် ကြလို့ ကျွန်မ UN အကြောင်း နည်း နည်း ပြောပါရစေ
Next post ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း ခံထားရတဲ့ ကျောင်းသားများ လွတ်မြောက် ရန် ကူညီပေး သူများအား အားသွန် ခွန်စိုက် ကြိုးစားပေးဖို့ တောင်းဆို လိုက်တဲ့ မေတိုးခိုင်